07/12/2017 - Page 4 sur 4 -
Malaza amin’ny fitsikerana sy ny fanakianana isika Malagasy, ary tena mahay manenjika ny hafa raha tsy hiteny afa-tsy ny fanenjehana Karana sy Sinoa ary Vazaha, saingy tsy mahay mitsara tena sy mijery fitaratra. Maty henjika …Tohiny
Voahangy Rajaonarimampianina : Nijery manokana ireo olona manana fahasembana
Toa ny efa fanaony isan-taona, dia tsy manadino ny vahoaka malagasy ny vadin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Voahangy, rehefa manakaiky ny fety ohatra izao amin’ny maha reny mpiahy ireo vehivavy, ireo reny sy ny zanaka azy. Misy …Tohiny
Mitohy hatrany ny fanaovana tomban’ezaka ny baiko sy ny toromarika napetraky ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria, amin’ny famongorana ny tsy fandriam-pahalemana. Tany Betsiaka, Distrikan’Ambilobe, faritra Diana indray no nanaovana fidinana ifotony sy jery todika ny …Tohiny
Nihaona nandritry ny adim-pamantaran’andro iray latsaka ny Amperoran’ny Japon, Sa majésté Akihoto mivady sy ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery mivady, omaly. Midika ho zava-dehibe amin’ity firenena ity ny fandraisan’ny Amperora tahaka izao, satria tsy ny olon-drehetra …Tohiny